दु:खद खबर – नेपालमा कोरोनाको कारण थप एकजनाको मृ’त्यु ! – Life Nepali
दु:खद खबर – नेपालमा कोरोनाको कारण थप एकजनाको मृ’त्यु !
११ साउन, वीरगञ्ज । वीरगञ्जस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा आइतबार बिहान मृ’त्यु भएका ६५ वर्षीय वृद्धमा कोरोना सं’क्रमण पुष्टि भएको छ । नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा मृ’तक वृद्धको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको मेसु डा. मदन उपाध्यायले जानकारी दिए ।
मधुमेह र मु’टुका रो’गी उनलाई केही दिनदेखि स्वास्थ्यमा स’मस्या थियो । कोरोना परीक्षणका लागि शनिबार नारायणी अस्पतालमा उनको स्वाब संकलन गरी उपचारका लागि वीरगञ्जस्थित हेल्थ केयरमा लगिएको थियो । त्यहाँ गरिएको आरडीटी परीक्षणमा उनको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो ।
आरडीटी पोजेटिभ देखिएसँगै उनलाई शनिबार राति वीरगञ्ज हेल्थकेयरबाट गण्डक अस्पतालमा भ’र्ना गरिएको थियो । शनिबार राति ११ बजे अ’चानक उनको अ’वस्था ग’म्भीर बनेपछि भेन्टिलेटरमा राखेर उ’पचार गरिएको थियो । गण्डक अस्पतालका कोओर्डिनेटर डा. उदयनारायण सिंहका अ नुसार उ’पचारका क्र’ममा उनको आइतबार बिहान ६ः४० मा मृ’त्यु भएको थियो । उनी वीरगञ्जस्थित आदर्शनगरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
Previous लकडाउन खुलेसङ्गै नेपालमा आज एकै दिन थपिए यति धेरै संक्रमित ( विवरण सहित )
Next Breaking News : देशैभरका बिधालयहरु संचालन हुने मिति तोकियो ! यो मितिबाट खुल्दैछ्न बिधालयहरु –